Wararkii ugu dambeeyay Qaraxa Baydhabo | Keydmedia
Wararkii ugu dambeeyay Qaraxa Baydhabo
Saraakiisha amniga waxay sheegeen in dadka dhintay ay kamid yihiin shacab goobta uu qaraxa ka dhacay ku sugnaa saakay.
BAYDHABO, Soomaaliya - Booliska maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan 5 ruux ay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen qarax miino oo saakay ka dhacay koonfurta magaaladda Baydhabo.
Qaraxa ayaa lala eegtay Ciidamo ku sugnaa Bar-Koontarool oo Canshuur looga qaado gaadiidka ka baxa Baydhabo, ee aada dhanka Baardheere, waxaana jugtiisa laga maqlay inta badan xaafadaha magaaladda.
Dhaawacyada ayaa loola carayay Isbitaalka Guud ee magaaladda, iyadoo amniga la adkeeyay kadib weerarka cabsi laga qabo qaraxyo kale, oo Sirdoonka ay ogaadeen inay Al-Shabaab qorsheynayso inay ka fuliso magaaladda.
Magaaladda oo martigelinaysa Madaxda Maamulka KG, ayaa waxaa ku sugna Ciidamo Itoobiyaan ah, oo xaga amniga ka taageera dowlad Goboleedka uu hogaamiyo Madaxweyne Lafta Gareen, oo lagu eedeeyay inuu ku fashilmay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.